ဖူးနုသဈ: ပွုံးဖို့ သကျသကျပါ
Posted by ZT at 3:55 AM
သုဒ္ဓေါ တို့များ ဦးတင်စိုးလို့ နာမည်ပြောင်းထားသကိုး
ရယ်ချင်နေတာ ဒီစာကို ဖတ်ပြီးရယ်ဖြစ်သွားတယ်၊ တရုတ်ကြီးကပိုရယ်ရတယ်၊
မေးစရာရှိတာက ဦးတင်စိုးသားက ဘာဖြစ်လို့ သူ့အဖေနာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ဝိုင်းဟားမယ်လို့ ထင်ရတာတဲ့လဲ။
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း နာမည် မခေါ်ဘဲ အဖေနာမည် ခေါ်တဲ့ အလေ့အထ ယောက်ျားလေးတွေမှာ ရှိတယ်လေ။ :D
တခြား အကြောင်းများ ရှိလားလို့ပါ။
ဆာမိ နဲ့ မူတူး
အတော်ရီရတာပဲ။ အနော် အူနှိပ်ပြီးတော့ကိုရီနေတာ.။
အဲမှာသွားလှူလိုက်တာ အသက် ၄၀လောက်ထဲက.
ချော်တောငေါ့ပြီး လျှောက်မတွေးကြေး..... :D :P
Hey man, itsagood joke.
Thanks for sharing.. :) :D